ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: April 2011
မိမိကိုယ်ကို အခွင့်အခါသင့်တိုင်း မေးနေသင့်သော မေးခွန်းနှစ်ခုရှိ၏ . . . ထိုမေးခွန်းနှစ်ခုမှာ "ငါ တစ်စုံတစ်ယောက်ထံမှ ဘာရခဲ့ဖူးသလဲ"ဟူသော မေးခွန်းနှင့် "ငါ ထိုသူအား ဘာကိုပြန်ပြီးပေးဆပ်ဖူးသလဲ " ဆိုသည့် မေးခွန်းများပင်ဖြစ်၏. . လူသားတိုင်းသည် အထီးတည်းနေနိုင်သော သတ္တ၀ါမဟုတ်သဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ရာအပေါ် မှီခိုအားထားနေကြရ၏ . . . .
ထို့ကြောင့် လူတိုင်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ရာထံမှ အကူအညီတစ်မျိုးမျိုး ယူခဲ့ ရခဲ့ကြသည်ချည်းဖြစ်ကြ၏. . . . သို့သော် ထိုရခဲ့သော အရာအတွက် ပြန်လည်ပေးဆက်ခဲ့သူ၏ အဖြစ်ကား လူတိုင်းတွင် ဖြစ်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းလှ၏. . . လူများစွာတို့သည် " ရယူ "သူများသာဖြစ်ကြ၍ "ပေးဆပ်" သူအဖြစ်ကိုမူ လူတိုင်းမရကြချေ။
ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစားသဘောနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြသောအခါ လူအများစုသည် မိဘကျေးဇူး၊ ဆရာ့ကျေးဇူး လောက်ကိုသာ သတိရလေ့ရှိကြပြီး ကျေးဇူးရှိသော ၊ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သော အခြားပုဂ္ဂိုလ်များကို မေ့လျော့နေကြ၏. . ရုပ်သဏ္ဍာန် ထင်ရှားရှိ၍ အသက်ရှိနေသူတို့ကိုသာ သတိရကြ၍ ရုပ်သဏ္ဍာန် မထင်ရှား၊ သက်မဲ့ပစ္စည်းများကိုမူ မေ့နေကြ၏. . .
မိမိအိမ်ကထွက်တိုင်း လျှောက်နေရသော ၊ မိမိအရေးတစ်စုံတစ်ရာ ရှိတိုင်း သွားလာလှုပ်ရှားနေရသော မိမိအိမ်ရှေ့လမ်းသည် မိမိ၏ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို တွေးခေါ်စဉ်းစားမိသူ နည်းမည်ထင်ပါ၏. . . တွေးခေါ်စဉ်းစားမိသည့်တိုင် ထိုလမ်းကလေးအပေါ် မိမိဘာပြန်ပေးရမလဲဆိုသည့် အတွေးကို စဉ်းစားမိသူ ဘယ်နှစ်ယောက်မှ ရှိမည် မထင်မိပါ. . (မိမိအပါအ၀င်) စင်စစ်မူ ထိုလမ်းကလေးသည် မိမိသွားရေးလာရေး လွယ်ကူချောမွေ့အောင် ကူညီပေး၏. . . အချိန်အတွင်း ရောက်နိုင်ပြန်နိုင်အောင် အခြေအနေ အခါအခွင့်ကိုပေး၏. . .
ထိုလမ်းကလေးဆီမှ မိမိသည် . . ခုလုတ်ကန်သင်း ဆူးငြောင့်တစ်စုံတစ်ာ မထိ၊ မငြိဘဲ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သော အကျိုးကိုရခဲ့၏. . . သွားလိုရာဆီသို့ စိတ်နှလုံးချမ်းသာစွာ ရောက်နိုင်ခဲ့သော အကျိုးကို ရခဲ့၏. . . သို့ပါလျှင် မိမိအကျိုးတစ်စုံတစ်ရာအတွက် ရယူနိုင်ခဲ့သော ထိုလမ်းကလေးအား သင်သည် ဘာကိုများ ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသနည်း. . . မြက်တစ်ပင်၊ ချုံတစ်ပုတ်ကို နှုတ်ယူရှင်းလင်းပေးခဲ့ဖူးပါသလား. . . ကျောက်ခဲတစ်ခြင်း တစ်တောင်း ဖို့ပေးခဲ့ဖူးပါသလား. . လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ရှိသည့် ရေမြောင်းကလေးများကို ရေစီးရေလာ ကောင်းအောင် ပေါက်တူးပြားလေးနှင့် ဘယ်နှစ်ချက်လောက် ပေါက်ဆွ တူးဖော်ပေးခဲ့ဖူးပါသလဲ. . .
ကျေးဇူးဟူသောသဘောသည် နက်ရှိုင်းသိမ်မွေ့လှ၏. . . သူ့ကျေးဇူး မိမိအပေးတင်ရှိနေကြောင်းကို တစ်ချက်ကလေးမျှ ပြန်ပြောင်းသတိရ၊ အောက်မေ့ခွင့်ရခြင်းသည်. . . ဖြစ်ခဲရခဲလှ၏. . . တစ်ဖန် သူ့ကျေးဇူးကို ပြန်၍ တုံ့ပြန်ပေးဆပ်ခွင့်ရခြင်း၊ ပေးဆပ်နိုင်ခြင်းသည် အဆတစ်ရာ ၊ အဆတစ်ထောင်မျှ ခက်ခဲလှ၏ ဟု ပညာရှိ အဆက်ဆက်က ဆိုခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်၏. . . ကျေးဇူးမသိတတ်သူ ၊ သူ့ကျေးဇူးသဘောကို နားမလည်သူတို့၏. . ဘ၀ကျဆုံးမှုနှင့် တန်ဖိုးမဲ့မှုတို့ကို ပြလိုသဖြင့် "ကျဉ်းမြောင်၍ မစင်အတိပြီးသော နေရာ၌ နေရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏. . . ထို့ထက် မချစ်မနှစ်သက်သောသူနှင့် နေရခြင်းသည် ပို၍ ဆင်းရဲ၏. . . . ထို့ထက် သူ့ကျေးဇူးကို မသိတတ်သူနှင့် နေရခြင်းသည် ပို၍ ဆင်းရဲ၏ " ဟု လောကနီတိတွင် မိန့်ဆိုထားကြ၏. .
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, April 30, 20112comments:
နေပူထဲက လူတစ်ယော်က အရိပ်မရှိတဲ့ ကမ်းနားတစ်လျှောက် မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ လမ်းလျှောက်လာပါတယ်. .
ကူးတို့သမား။ ''အလကားပို့ပေးမယ် ...."
လူ။ "ဘယ်ကိုလဲ . . . "
ကူးတို့သမား။ "ဟိုဘက် . . "
ကူးတို့သမား လက်ညှိုးညွှန်ပြတဲ့ ဟိုတစ်ဖက်ကမ်းက သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်နဲ့ အတော်စိမ်းလန်းပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့ကြည်နူးစရာပါ။
လူ။ "အတော်အေးချမ်းမှာပဲ၊ ပို့ခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။"
ကူးတို့သမား ။ "စေတနာပါ။ ပေးစရာမလိုဘူး ။ "
လူ။ ဒါဆို ခဏဗျာ။ "ကျုပ်မိသားစု တွေ သွားခေါ်လိုက်အုံးမယ်. . . . "
နေပူထဲ စိုက်စိုက် စိုက် စိုက်နဲ့ ပြန်သွားပါတယ်. . အချိန်တွေ ကုန်သွားပေမယ့် ပြန်မလာတော့ပါဘူး။
ရေးသားသူ may16 at Thursday, April 28, 20112comments:
ဖြစ်ကြပျက်ကြ ၊ နိယာမကို
သင်က ဘာကြောင့် ကြောက်သနည်း။
တို့ကား ရှောင်ကွင်း၊ မရခြင်းကို
ဖြတ်သန်းခရီး ၊ ကန္တာရကြီးတွင်
ဘ၀တွေ့ကြုံ ၊ သင်၌စုံ၏။
ဖြစ်ကြ ပျက်ကြ၊ နိယာမကို
သင်က ဘာကြောင့် ကြောက်သနည်း။ ။
ရေးသားသူ may16 at Sunday, April 24, 2011 No comments:
ခုတစ်လော ကျွန်မ ပန်းကဗျာ နေမကောင်းဖြစ်ပြီးကတည်းက ချောင်းဆိုးတာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်. . . ဘာဆေးသောက်သောက် အနေအထိုင် အစားအသောက် မဆင်ခြင်လို့လား မသိဘူး ဒီချောင်းဆိုးက မပျောက်ဘူးဖြစ်နေတယ် ဒါနဲ့ ချောင်းဆိုးရခြင်း အကြောင်းအရာလေးတွေ လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်. . . .
ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးနေခြင်းမှာ အပူများပြီး အစာအိမ်မှ အက်စစ်ဓာတ် ထုတ်လုတ်မှုများခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. . . အက်စစ်ဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ဆေးဝါးများကို မှီဝဲဖို့လိုပါတယ်. .
အကယ်၍ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ ၀မ်းခေါင်းသံ ပါခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အအေးမိခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ လည်ချောင်းယားယံမှုကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်. . . ထိုအခါမျိုးမှာ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး(သို့) ချောင်းဆိုးခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သော ဆေးများ သောက်သုံးနိုင်သော်လည်း ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း (သို့) ဆေးအညွှန်းကို သေချာ ဖတ်ရှုပြီးမှသာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်. . . ၄င်းဆေးအမျိုးအစားအများစုမှာ ငိုက်မျဉ်းစေတတ်သောကြောင့် ဖြစ်တယ်. . .
ရေနွေးငွေ့ရှုရှိုက်ခြင်း၊ ရေနွေးပူပူကို မကြာခဏ ခပ်များများ သောက်သုံးပေးခြင်းကလည်း သက်သာစေသည့် နည်းလမ်း တစ်ခုပါပဲ . . ချောင်းဆိုးနေစဉ်မှာ ဆီနှင့် ကြော်ထားသည့် မည်သည့် အစားအစာ မဆို (လည်ချောင်း ပိုယားယံစေ၍) ခပ်ဝေးဝေးက ရှောင်ကြဉ်ပါ. . .
ချောင်းဆိုးသံက တရွှီရွှီ မြည်သံ ထွက်နေရင်တော့ ရင်ကျပ်ရောဂါ ပျော့စား ဖြစ်ဖို့ အစပျိုးနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. . ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်ထံ အမြန်ပြသပါ . . . ချောင်းဆိုးရာမှ ပါလာသော သလိပ်သည် အ၀ါရောင်၊ စိမ်းဖန့်ဖန့် အရောင်ဖြစ်နေပါက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသော်လည်းကောင်း ရင်ကျပ်ရောဂါကြောင့်သော် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်သည့် အပြင် နမိုးနီးယား၏ လက္ခဏာ တစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်. . . ၂၄ နာရီထက်ပိုပြီး ဆက်တိုက်ဆိုးနေပါက ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပဋီဇီဝဆေး (antibiotics) များ မှီဝဲသင့်ပါတယ်. .
ရေးသားသူ poemflower at Friday, April 22, 20112comments:
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, April 20, 2011 No comments:
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူ တိုင်းလူတိုင်းထား ရှိသည့် ကျန်းမာခြင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်(၃)ခုကတော့
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက အလွန်ရိုးစင်းလွန်းတဲ့ လမ်းလျှောက်ခြင်းဟာ အထက်ပါရည်မှန်းချက် ၃ မျိုးစလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ ဒီနည်းဟာ အလွယ်ဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံး ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားခြင်းဟာ စံပြဓာတ်စာနည်းတစ်ခုပါပဲ။ သည်နည်းဟာ ကယ်လိုရီ၊ အဆီများကို လျှော့ချနိုင်ရုံမက ခနာကိုယ် မှ လိုအပ်သော ဗီတာမင်ဓာတ်၊သတ္တုဓာတ်များကို အလွန် ကြွယ်ဝစွာ ရရှိစေပါတယ်။
သစ်သီးဝလံများစားသောက်ခြင်း။လမ်းသောက်ခြင်းဖြင့်ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် တစ်ပေါင်ကျစီ ပုံမှန်လျှော့ ချနိုင်ပါသည်။ နံနက်စာ၊ ညစာများစားသောက်ပြီးနောက် သုံးမိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက် ခြင်းသည် နှစ်စဉ် ကိုယ်အလေးချိန် လေးပေါင်ခန့် ပျမ်းမျှခြင်း လျှော့ချနိုင်ပြီး နေ့စဉ် နှစ်ကြိမ်ခန့် လှေကားအတက်အဆင်း လုပ်ခြင်းသည်နှစ်စဉ် ပေါင်ဝက်ခန့် ကျစေပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်က ကြည့်လျှင် နေ့စဉ် သကြားလုံး တစ်လုံးစီ ပုံမှန် စားသုံးခြင်း ဟာ နှစ်စဉ် ပေါင်နှစ်ဆယ်ခန့် တိုးစေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချမည့် စိတ်ကူးသင့်မှာရှိလျှင် သင့်စိတ်ကို ပြတ်သားစွာ ပိုင်းဖြတ်၍ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ခြင်းစီမံကိန်းမှာ နှစ်မြှုပ်ထားပါ။ အပြုသဘောဆောင်သော အတွေးစိတ်ကူးသင့်မှာရှိပါ။ ဤကဲ့သို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်မှုက body weight လျှော့ချမှုအတွက် အလွန်သိသာသော အထောက်အပံ့ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမှသာ အောင်မြင် မည် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါ၍ အချိန်ယူပြီး လေ့ကျင့်ပါ။ နေထိုင်မှု ပုံစံများကို ပြောင်းလဲသင့်လျှင် ပြောင်းပစ်ပါ။ သည်နည်းလမ်းဟာ ဘ၀အောင်မြင်မှု အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် သော့ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ်။
ရေးသားသူ poemflower at Monday, April 18, 2011 No comments:
ဂရိပညာရှိကြီးဆိုကရေးတီး၏သွန်သင်ချက်များတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါဆိုသောစကားသည် တိုတောင်းဆုံးနှင့် အဓိပ္ပာယ်အလေးနက်ဆုံးအကျယ်ဝန်းဆုံး ဖြစ်၏။ ထိုစကားသည် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ ၀ကွက်ပြီး သိနေဖို့ မဟုတ်။ မိမိနှင့်ပတ်သက်သမျှကသိအ်ေင်ကြိုးစားရန်တိုက်တွန်း ထားခြင်းဖြစ်၏။
မိမိဘာလုပ်နေသည် ၊ဘာတွေစိတ်ကူးနေသည်၊ မိမိဘ၀စားဝတ်နေရေးအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကိုင် ရှာဖွေနေသည်၊ မိမိဘ၀တိုးတက်နေသည်၊ မိမိပြောဆိုကြံစည်နေသမျှသည် မှားယွင်းနေသည်၊သို့မဟုတ် မှန်ကန်နေသည် စသည်ဖြင့် မိမိဘ၀တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံ သိရှိခြင်းဖြစ်၏။
မိမိဘာဖြစ်နေသည်ကို သိမှသာလျှင် မိမိဘ၀ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ဖြည့်ဆည်းလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်၏။ မိမိဘ၀ကို ပဲ့ကိုင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိဘဲ ဖြစ်ချင်သလိုလွှတ်ထားသူသည် တကယ်စင်စစ် မိမိဘာဖြစ်သည်ကို မသိသောကြောင့် ဖြစ်၏။
စောလူးမင်းသည် မိမိ၏အံကစားခြင်းစသော လောင်းကစားပျော်ရွှင်ခြင်း၌ စွဲမက်လွန်းသည့်အဖြစ်ကို မသိသောကြောင့် ငရန်ကန်း၏ လက်ချက်ဖြင့် ရာဇပလ္လင်ထက်မှ ပျေက်ကွယ်သွားရ၏။
တပင်ရွှေထီးသည် သေရည်သောက်စားခြင်း၌ ၀ါသနာထုံလွန်းသဖြင့် တိုင်းရေးပြည်ရေးကို လျစ်လျူပြုနိုင်အောင် တွေဝေမိုက်မဲနေသည့်အဖြစ်ကို မသိသောကြောင့် စစ်တောင်းစား၏ ဓားချက်ဖြင့်ခန္ဒာအိုးစားကွဲခဲ့ရ၏။
မိမိဘာဖြစ်နေသည်ကို မိမိကိုယ်တိုင် မသိသောကြောင့် သူတို့သည် ဘ၀နွံအိုင်ထဲတွင် နစ်မွန်းသွားကြ၏။ မသိခြင်း၏ ဆိုးကျိုးကား နှိုင်းတု၍မရအောင် ကြီးမားလှ၏။
ဥာဏာပညာသည် မှာဒသည်၊မှန်သည်၊ အကျိုးမဲ့သည်ကို ရှင်းလင်းပီပြင်စွာ ခွဲခြားနိုင်သော လူစွမ်းရည် တစ်ရပ်ဖြစ်၏။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဥာဏ်ပညာဖြင့် ထိန်းအုပ်ထားရာ၏။သတိသည် မိမိဘာဖြစ်နေသည်ကို ချက်ချင်းသိနိုင်သော စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ သမာဓိသည် မိမိ၏စိတ်ကို တည်တဲ့ခိုင်မြဲနေအောင် ထောက်ကူ ထိန်းကွပ်ထားနိုင်သော စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ မိမိစိတ်ကို မယိမ်းမယိုင် တည်မြဲနေအောင် သမာဓိဖြင့် ထိန်းချပ်ထားရာ၏။
ဥာဏ်ပညာ၊ သတိနှင့် သမာဓိတို့သည် ဘ၀နွံတွင်းသို့ မသက်ဆင်းသွားနိုင်အောင် ကာရံထားအပ်သည့် တံတိုင်းကြီးများဖြစ်၏။လှပတင့်တယ်သော ဘ၀တစ်ခုကို ထုပ်ပိုးဝန်းရံထားသော ကြိုးများလည်းဖြစ်၏။ ထိုတံတိုင်းများ ၊ကြိုးများဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းစွာ ၀န်းရံချည်နှောင်ထားနိုင်လျှင် အတ္တသမ္မာပဏီဓိစ ဟူသော မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းစွာ ထိန်းမတ်ထားနိုင်မည်မှာ သေချာနေပေတော့သည်။
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, April 16, 2011 1 comment:
တစ်နေ့ ကျွန်တော့် ဆီကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။
"ငါ့အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းဘူးကွာ။ ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားက သိပ်မှန်တာပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ထီထိုးသလိုပဲတဲ့။ ဒါနဲ့မင်းရော အိမ်ထောင်ကျပြီလား။"
"အေးကွာ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် ထီထိုးသလိုပဲ ဆိုတဲ့ စကားကို သတိရပေါ့ကွာ………."
သူ့စကားကို အဆုံးသတ်ပြီး လှည့်ထွက်သွားပါတယ်။
"အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ထီထိုးတယ်လို့ ယူဆရင်လည်း မပေါက်မချင်း ဆက်ထိုးခွင့်ရှိတာပဲ။"
လို့ပြောလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်စကားကို သူမကြား လိုက်တော့ပါဘူး။
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, April 14, 20112comments:
နှုတ်က လုပ်နေတဲ့ကံ ကတော့ ၀စီကံပါပဲ။ လောက လူသားတွေဟာ မပြောမပြီး၊ မတီးမမြည်မို့ ပြောစရာ ရှိတာပြောကိုပြောရပါတယ်။ အချို့က အမှန်ပြောတယ်။ အချို့ကတော့ လိုအပ်မှုအပေါ် အကြောင်းပြပြီး လိမ်လည်ပြောတယ်။ မုသားမပါ လကာင်္မချောရယ်လို့ သဘောပိုက်ပြီး ပြောလိုက်ကြတယ်။
မုသားစွက်လို့ သူများဘက် ကနစ်နာသွားရင်ဝစီကံအပြစ်ကိုကျူးလွန်မိတာပါပဲ။အချို့ကလွယ်လွယ်ပြောပြီး လွယ်လွယ်ကျူးလွန်နေကြတယ်။ စကားပြောတယ်ဆိုတာ ကာယကံမြောက် လုပ်ကိုင်ပေးရတာလောက် မပင်ပန်းဘူး။နှုတ်ကနေပဲစိုက်ထုတ်ရတယ်။
သိပ်မပင်ပန်းတော့စိတ်ထင်တိုင်း မှန်းပြီး ကိုယ်ပြောချင်ရာ မုသားပြောတာပဲ။ကိုယ့်အကျိုးအတွက် အပိုတွေ တိုးစွက်လို့ မဟုတ်မှန်တာတွေ ပြောတော့တာပါပဲ။ စကားမှာ အမှားပါရင် ငါးပါးသီလထဲက တစ်ပါးပျက်တာပါပဲ။
၀စီကံအမှုမှာကို မထိန်းသိမ်းလို့ စီးပွားရေးနဲ့ ကြီးပွားရေးမှာ မဖြစ်ထွန်းမအောင်မြင်သူတွေ ရှိကြပါတယ်။ အပြောမမှန်သူဆိုတာ လောကမှာ ဘေးဖယ်ခံရတတ်တာအမှန်ပါပဲ။ လိမ်ညာ ပြောတတ်မှန်း သိလာတဲ့အခါ အမှန်ပြောလည်း လက်မခံမယုံကြည်ချင်ကြတော့ဘူး။
စကားအယုတ်အညံ့တွေနဲ့ တအားနှုတ်မဆန့်အောင် ပြောနေတတ်သူတွေဟာလည်း ၀စီဗေဒထိတိုင်းရှ နေတာပါပဲ။
ဖရုသ၀ါစာ ဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်မာမာ၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးဟာ ငရဲသွားရအောင် ပြောတဲ့စကားမျိုး။ ငရဲမသွားရသေးချိန်မှာလည်း လူမုန်းခံရပါတယ်။
ပိသုဏ၀ါစာဖြစ်တဲ့ ကုန်းတိုက်စကားမျိုးဟာလည်း ငရဲသွားရမဲ့ စကားမျိုးပါပဲ။ ကိုယ်ကုန်းတိုက်လို့ သူများကွဲကွဲ၊မကွဲကွဲ ကိုယ့်မှာတော့ အပြစ်ရသွားပြီဖြစ်တယ်။ (ပိသုဏ၀ါစာ ဟာ ကုန်းချောခံရတဲ့ လူနှစ်ဦး ကွဲပြားမှသာ ကမပထမြောက်တယ်)။
သမ္မပ္ပလာပဖြစ်တဲ့ သူများအကျိုး ထိခိုက်တဲ့ စကားကလည်း ငရဲသွားရမယ့် စကားမျိုးပါပဲ။
မုသာဝါဒဖြစ်တဲ့ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြောတဲ့ စကားကလည်း ငရဲသွားရမယ့် စကားမျိုး။ ကိုယ်လိမ်ပြောလို့အလိမ်ခံရသူ အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်ရင် ကမ္မပ္ပထမြောက်တယ်။ မုသာဝါဒကို ယုံလို့ ပုံမိသူတွေရဲ့ ဒုက္ခဟာ ကြီးမားသလို ပြင်းထန်စွာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
၀စီကံအမှားဟာ အကုသိုလ်ကံကိုသွားပါတယ်။အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်နှုတ်က ပြောပြီးဖြစ်တဲ့ အကုသိုလ်ပါပဲ။
အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ အကုသလကမ္မပ္ပထ တရား(၁၀)ပါးထဲမှာ…………..
၃။ ယုတ်မာကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားပြောတာ၊
၄။ အကျိုးမရှိ သိမ်ဖျင်းတဲ့စကားပြောတာ၊
အဲ့သည် ( ၄ )မျိုးပါဝင်ပါတယ်။
၀စီကံအမှုကို စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းနိုင်မှသာ ငရဲလွတ်မယ်။ မှန်ကန်ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ် အလိမာ ပါတဲ့ ပုလဲသွယ် စကားမျိုး ပြောနိုင်အောင် အမြဲတကယ် ကြိုးစားပြောကြရမယ်။
ငရဲစကားမပြောဘဲ ပုလဲစကား ပြောရမှာဖြစ်တယ်။
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, April 12, 20112comments:
ဘ၀အဖော်မွန် ရှာပြီး အိမ်ထောင်ပြုပေလိမ့်မယ်။
သတိထားရလိမ့်မယ်. . .နော်
ညီအစ်ကို မောင်နှမ ဆွေမျိုးများတဲ့
အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ သိပ်မလွယ်လှဘူး
မိဘ သိပ်ချစ်တဲ့သူ ယူမိတဲ့အခါ
သူ့မိဘတွေနဲ့ ကိုယ်က ပေါင်းရတော့မှာ
ကိုယ်ကလည်း သူတို့အပေါ် အကောင်းမမြင်တဲ့အခါ
ပြည်ပန်းညို ချိုပါလျက် ဆားကဖျက်တဲ့ ကိန်းမျိုး
ချစ်လို့ ယူပြီးကာမှ မိဘဆွေမျိုး
ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေနဲ့ အဆင်မပြေလို့
ကွဲကွာ ခွဲခွာရရင် မကောင်းဘူးပေါ့နော်
ဒါကြောင့် မယူခင်က သေချာမေး
သေချာရွေးပါလို့ ဖေဖေ သတိပေးချင်တယ်
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, April 09, 2011 1 comment:
ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိရင် လုပ်လို့ရတဲ့နေရာက စလုပ်။
အလုပ်တွေ ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိဘူး လို့
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, April 05, 2011 No comments:
အရှင်ယသတို့သားအဘ ဘုရားနှင့်တွေ့ ၍ တရားနာနေပုံ။
ဘုရားဖြစ်မည့်နေ့၌ဃနာနို့ဆွမ်းလှူဒါန်းဆက်ကပ်သောသုဇာတာ၏သားဦးရတနာဖြစ်သော ယသ သတို့သား သည် ဘုရားအလောင်းစံနေသကဲ့သို့ ဆောင်းနွေမိုး ဥတု ၃ပါးနှင့်သင့်တော်သော ပြာသာဒ် ၃ဆောင်ဖြင့် စံစား၍နေစဉ် ညဉ့်အချိန်မှာ အိပ်ရာမှနိုးလေသော်မတော်မလျော် အိပ်ပျော်နေကြသော အခြွေအရံ မိန်းမ တစ်စုကိုမြင်မိ၍ သုသာန်ကဲ့သို့ထင်ကာ မိဂဒါဝုန်ဖက်သို့ ညချင်းပင် ထွက်လာလေသည်။
ထိုအခါ ဘုရားနှင့်တွေ့၍ တရားနာရသဖြင့် သောတာပန်ဖြစ်ပြီးနောက် လိုက်၍ရှာသော ဘခင်အား သားကိုမမြင်ရအောင် တန်ခိုးဖြင့်ကွယ်ထား၍ အသင့်သားကို တွေ့ရပါလိမ့်မည် ဟုမိန့်တော်မူကာ တရားတော်ကို ဟောပြန်ရာ သောတာပန်ဖြစ်၍ ယသ သတို့သားလည်း ရဟန္တာဖြစ်လေသည်။ ထိုအခါ တန်ခိုးတော်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သဖြင့် သားအဘတွေ့ကြ၍ ယသ လည်း ရဟန်းပြုလေသည်။
VNERABLE YASA AND HIS FATHER MET THE BUDDHA
Yasa was the first born son of Sujata who offered milk-porridge to the Great Being on the very day he was to become the Enlightened Buddha. He had been brought up in the greatest luxury as in the case of the Future Buddha, three separate mansions being provided for three different seasons, namely, the wet, cold and dry seasons. Waking up one night , he found his place attendants, female musicians, asleep in unseemly conditions, and deeming the scene to beacemetery, went out from his house and the city to the Dee Park of Isipatana that every night.
Yasa came into the presence of the Buddha and, after hearing the sermon from the Blessed One, was established in the first noble stage of the Aryan Path. Yasa s father went in search of his son and came to the Buddha. The Buddha made Yasa invisible with his supernatural power and assuring him with these words.You will find your son preachedasermon to him. Yasa s father was also established in the fourth holy stage of the Aryan Path. The Blessed One then discontinued the use of the supernatural power with the result that the father met the son, and ordained Yasa asamonk at his request.
ဒေါသဆိုတာ ခဏတာ ရူးသွတ်ခြင်းပဲ
တစ်ချို့ က စိတ်ဆိုးလွယ်တာကို
တကယ်တမ်းကြတော့ . .
သူတို့ကိုယ် သူတို့ သေသေချာချာ
ဒေါသကြောင့် ဘယ်နှစ်ခါ မှားပြီးပြီလဲ
တချို့ဆို. . .
တကယ်တော့ . .
ရေးသားသူ poemflower at Friday, April 01, 2011 1 comment: